Faa'iidooyinka Qajaar - Cunnooyin caafimaad leh oo ay cunaan ragga qaabka leh | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon, Nafaqeyn
Soo ogow sida cunnadan macaan ay ugu jiri karto faa'iidooyin muhiim u ah caafimaadkeena. Qajaar si weyn ayey u cunaan dadka reer Mexico, laakiin sidoo kale dalal badan ayaa laga helaa, ilaa wuxuu siiyaa oo uu wanaajiyaa dhadhanka saladh badan oo ka dhigaya saxan cusbooneysiin leh qiimo weyn oo nafaqooyin ah.
Miraha ama khudradda? Shaki la'aan waa miro, maadaama ay ku jiraan miraha gudaha ku jira, wuxuu ka kooban yahay saxarka oo ku duuban diirkiisa. In kasta oo dhinaca kale ay u muuqato khudrad tan iyo markii lagu cuno saladhyada, qaar ka mid ah suxuunta waaweyn ama wehel u ah suxuunno badan, waa la siin karaa qaybtaas, laakiin tusaale ahaan looma cuno macmacaan. Waxaa iska leh qoyska cucurbits wuxuuna la xiriiraa zucchini, squash, qaraha, iyo cantaloupe.
1 Qiimaha nafaqada ee qajaar
2 Faa'iidooyinka qajaar
2.1 Aad u qoyaan jidhkeena oo aad ugu fiican miisaanka oo yaraada
2.2 Aad ugu fiican miisaan luminta
2.3 La dagaallama daalka iyo walbahaarka
2.4 Ka-faa'iideyste cudurro badan
2.5 Wuxuu ilaaliyaa wadnaha wuuna u fiican yahay maskaxda
2.6 Antioxidant iyo gabowga
3 Faa'iidooyinka la isku qurxiyo
Qiimaha nafaqada ee qajaar
Marka xigta, waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa nafaqada 100-kii g ee cuntadan ah:
Kalooriyeyaasha: 15 Kcal
Borotiin: 0,70 g
Kaarboohaydraytyada: 1,9 garaam
Dufan: 0,20 garaam
Soo jeedin: 2,5 garaam
Fibre: 0,5 garaam
Biyaha: 95 garaam
Vitamin A: 105 milligram
Fiitamiin B: 7 milligram
Folic acid: 19,40 microgram
Magnesio: 7,30 milligram
Vitamina C: 2,8 milligram
Kaliumpermanganat: 140 milligram
Fosfooras: 11 milligram
Hierro: 0.20 milligram
Zinc: 0,14 milligram
Aad u qoyaan jidhkeena oo aad ugu fiican miisaanka oo yaraada
Waxay kakooban tahay 90% biyo sidaa darteed waxay noqoneysaa a dhammaystirka ugu habboon ee biyo maalmeedkeennasidoo kale waxay caawisaa baabi'inta sunta in jirkeenu uusan mar dambe u baahnayn milmi dhagxaanta kelyaha. Waa cunto aad u cusboonaysiin maadaama ay ka caawineyso nafaqeynta unugyadeena.
Aad ugu fiican miisaan luminta
Way ku habboon tahay raacitaanka cuntada miisaanka oo yaraata, iyada ayaa ku mahadsan biyo badan iyo kaloriin qaadashada oo aad uyar. Intaa waxaa sii dheer, waxay u roonaan doontaa dheefshiidka maadaama ay hodan ku tahay fiberka waxayna gacan ka geysaneysaa hagaajinta PH ee caloosha.
La dagaallama daalka iyo walbahaarka
Midhahaani waxay hodan ku yihiin fitamiin B, kaabadan wuxuu muhiim u yahay shaqada wanaagsan ee adrenal, wuxuu dabciyaa nidaamka neerfaha wuxuuna yareeyaa welwelka, isaga oo ka dhigaya fitamiin "anti-stress". Haddii aad isku darto qajaarka ku jira labeenka tufaax ama liin dhanaanta waxay noqon doontaa xoog wax xoog badan oo lagula dagaallamo daalka, sidoo kale waa xulafo wanaagsan maalmahaas hunguriga.
Ka-faa'iideyste cudurro badan
Ka qayb qaadashadeeda 'silicon' waxay gacan ka geysaneysaa xoojinta kala-goysyada iyo unugyada isku xidha. Waxtarkeeda fiitamiinnada iyo macdanta Waxay kaa caawin doontaa baabi'inta xanuunka ay keeneen turqo iyo arthritis, iyo sidoo kale yareynta uric acid.
Wuxuu ilaaliyaa wadnaha wuuna u fiican yahay maskaxda
Wax ku biirinta potassium waxay ka caawisaa nidaaminta cadaadiska dhiigga iyo nidaaminta shaqooyinka gacanta. Waxay ka kooban tahay flavonol, antioxidant anti-bararka oo doorbida xiriirka ka dhexeeya neerfaha, sidaa darteed waxay daryeeshaa maskaxdeena.
Antioxidant iyo gabowga
Waxay ka koobantahay fiitamiin C, oo ah xulaf weyn oo kahortaga gabowga. Faytamiinkan wuxuu ku urursan yahay jilifkiisa waxtarkiisuna wuxuu ka kooban yahay 12% qadarka maalinlaha ah ee lagula taliyo. Awooddeeda antioxidant-ka weyn waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta wareegga dhiigga iyo hagaajinta muuqaalka ciddiyaha, indhaha iyo timaha. Waa saaxiib weyn oo qurux badan, tan iyo wuxuu daahiyaa gabowga maqaarka iyo unugyada.
Faa'iidooyinka la isku qurxiyo
Xaqiiqdii waad xasuusataa sawirka qof jiifa iyadoo qaar ka mid ah qajaar qajaarka indhaha ka saaran yihiin waxaana ku jirta faa iido Aan caadi aheyn in la yareeyo bacaha dhibsada ee indhaha hoostooda. Jeex jeexjeexo indhahaaga 20 daqiiqo oo sidan samee laba illaa saddex jeer usbuucii. Waxay kaa caawin doontaa inaad aragto indho nasasho badan oo aan lahayn barar.
Qurxin ahaan waxay leedahay waxyaabo ay ka mid yihiin fitamiinnada A, E iyo C, biyaha, saliidaha dabiiciga ah iyo kuwa loo yaqaan 'cellulose' Faa'iido badan u leh fuuq celinta, xasilloonida, codka iyo adkeynta maqaarka. Tan waxaad ku diyaarin kartaa waji-garaacyada guriga lagu sameeyo sidan oo kale: isku dar 1 qajaar oo dhan iyo casiirka liin dhanaanta. Ku fidi wejigaaga indhaha iyo afka mooyee. Sii daa ilaa 15 daqiiqo oo biyo raaci biyo qabow. Waa sumad maqaar aad u fiican waxayna ka caawisaa kahortagga duuduubka.
Haddii aad wax ku xumaatay qorraxda oo ay ku keentay qoraxdu maqaarkaaga, qajaar ayaa ah xalkaaga inaad dejiso aagga. Waad burburin kartaa qajaar oo aad ku dari kartaa aloe vera. Isku dar ah oo la dhigo maqaarka ay dhibaatadu saameysey illaa 15 daqiiqo ayaa kaa dhigi doonta inaad dareento horumar weyn oo maqaarkaaga ah.
Timahaaga sidoo kale waa xulaf weyn maxaa yeelay waxay ka caawisaa nafaqeynta iyo fuuqbaxa, marka lagu daro bixinta dhalaal weyn oo ku saabsan dhammaadkiisa. Waxyaabaha ay ka kooban tahay silikoon iyo baaruud ayaa faa'iido u leh inay ka caawiyaan koritaanka timaha iyo fitamiinnada A, B iyo C Waxay ka caawiyaan xoojinta xididka, markaa timuhu way sii xoogaysanayaan oo weynaanayaan. Waad samayn kartaa maaskaro ka kooban qajaar, rubuc koob oo saliid saytuun ah iyo ukun. Waa inaad si fiican u garaacdaa oo aad ku marisaa timaha qoyan. Timahaaga ku masaaji gacmahaaga kuna dabool dabool biyo balaastiig ah nus saac. Kadib biyo raaci biyo badan si aad u saarto maaskaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Faa'iidooyinka qajaar
Marka gadhku ragga ku soo bixi waayo
Noocyada jirka: somatotypes